Dunida Nokia Bell Labs waxay diiwaan galisaa hal-abuurnimo ku saabsan fiber optics si ay awood ugu yeelato awood dheeri ah oo sare leh shabakadaha 5G ee mustaqbalka
Dhawaan, Nokia Bell Shaybaarka ayaa ku dhawaaqay in cilmi-baarayaasheeda ay dhigeen rikoodh adduunka ah heerka ugu sarreeya ee hal-xambaara heerka qiyaasta halbeegga halbeegga halbeegga ah ee 80 kiiloomitir, ugu badnaanna 1.52 Tbit / s, oo u dhiganta gudbinta 1.5 milyan YouTube fiidiyowyo isla waqti isku mid ah. Waa afar ...
Warshadaha isgaarsiinta indhaha ma noqon doonaan "badbaadayaasha" COVID-19?
Bishii Maarso, 2020, LightCounting, oo ah hay'ad cilmi baaris ku sameysa isgaarsiinta indhaha, ayaa qiimeysay saameynta uu coronavirus-ka cusub (COVID-19) ku yeeshay warshadaha saddexdii bilood ee ugu horreysay ka dib. Saddexdii bilood ee ugu horreysay sannadka 2020 ayaa dhammaad ku dhow, adduunkana waxaa ku habsaday cudurka COVID-19 ee faafa. Dad badan oo countri ...
LightCounting: Warshadaha isgaarsiinta indhaha ayaa noqon doona kuwa ugu horreeya ee ka soo kabsada COVID-19
Bishii Meey., 2020, LightCounting, oo ah hay'ad caan ku ah cilmi baarista suuqa isgaarsiinta indhaha, ayaa sheegtay in marka la gaaro sannadka 2020-ka, xawaaraha horumarka ee warshadaha isgaarsiinta indhaha uu aad u xoogan yahay. Dhamaadka 2019, dalabka DWDM, Ethernet, iyo wireless fronthaul ayaa kordhay, taasoo keentay gaabis ...
Cilmi baaristu waxay sheegaysaa in suuqyada muraayadaha indhaha ay ka badnaan doonaan USD17.7 bilyan sanadka 2025, iyadoo ay ugu badantahay xarumaha xogta
Cabirka suuqa ee modullada indhaha wuxuu gaarayaa kudhowaad USD7.7 bilyan sanadka 2019, waxaana lafilayaa in kabadan labalaab illaa kudhowaad USD17.7 bilyan sanadka 2025, oo leh CAGR (heerka kobaca sanadlaha isku dhafan) oo ah 15% laga bilaabo 2019 ilaa 2025. ” YoleD & Veloppement (Yole) Falanqeeyaha Martin Vallo sai ...